Njikwa ụgbọ okporo ígwè Arsiv - RayHaber
Homeụgbọ okporo ígwèUsoro okporo ụzọ okporo ụzọ
TCDD na-edozi Nsogbu Co-na ụgbọ oloko
N’ọdụ ụgbọ oloko, a kwụsịrị nsogbu ọgbaghara dị n’ire tiketi, ọ bụrụgodi na ọ bụ nwunye n’akụkụ ndị njem nke nwanyị onye zụtara ma ọ bụ gbaa akwụkwọ. CDgbọ njem TCDD họpụtara kişi ọnụ onye amaçla maka ebumnuche a. Onye na-ahụ maka ọrụ igbe, tiketi tupu ire ere onye ọlụlụ agwa onye ahụ [More ...]
Ọnụahịa tiketi tiketi GMT na usoro nhazi: 2019 ugbu a dị elu ọnụ ahịa Tọọsi Ego njem na njem: tragbọ oloko dị elu na-eme ka ndụ anyị dị mfe na njem ụgbọ elu na-ejikọ obodo dị iche iche, ndị njem na ọdịbendị. [More ...]
YhT tiketi | Ngwá ụgbọ elu ọsọ ọsọ: Otu ụgbọ okporo ígwè dị elu nke na-arụ ọrụ n'etiti Eskişehir na Ankara na ịkwaga na 16.35 sitere na Eskişehir tinyere nkwụsị ikpe kwa ọnwa na 1 na Polatlı. Ọ bụrụ na ndị njem zuru oke, a ga-enwe njedebe na-adịgide adịgide. Elu ọsọ ọsọ [More ...]
Ụlọ elu ọsọ ọsọ: Azụ ụgbọ elu dị n'etiti Eskişehir na Ankara ma na-arụ ọrụ na 16.35 si Eskişehir tinyere nkwụsị ikpe kwa ọnwa na 1 na Polatlı. Ọ bụrụ na ndị njem zuru oke, a ga-enwe njedebe na-adịgide adịgide. High Speed ​​Ịzụ tiketi Ahịa 25 [More ...]